Accueil > Gazetin'ny nosy > Me Razafinjatovo Willy Ôlala : Lavo ny andrarezina
Me Razafinjatovo Willy Ôlala : Lavo ny andrarezina
Banga iray indray ny laharan’ny mpiaro-mpisolovava Malagasy. Nodimandry omaly talata ny Me Willy Razafinjatovo, fantatry ny maro amin’ny hoe “Me Ôlala”. Tsy zoviana amin’ny maro ny Me Ôlala fa nijoro niaro ny sokajin’olona maro, ary nitsinjo manokana ny sahirana ianjadian’ny tsindrihazolena sy niharan’ny tsy rariny. Maro ny sokajin’olona nanana raharaha teny amin’ny Fitsarana no nanatona ny Me Ôlala mba harovany, ary tsy nitakiany na nifanarahany vola izany fa nataony maimaim-poana. Isan’ny nijoro niaro tsy nisy sandany ny mpanao gazety voarohirohy eny amin’ny Fitsarana ny Me Razafinjatovo Willy.
Teo amin’ny sehatra politika dia ny Raharaha May 1972 no tena nampahalaza azy, ary nahazoany ny anarana hoe “Me Ôlala”. Nisahana ny fandaminana ankapobeny (service d’ordre) teo amin’ny kianjan’ny 13 May izy tamin’izany, ary matetika no voafiran’ny vavany ny hoe “ôlala!”, ka naharaikitra azy hoe “Me Ôlala”. Izy no mpitarika ny Hetsika 13 May 72, izay ivondronan’ireo akanga sisa nanamborana tamin’ireo mpiara-nitolona tramin’ny May 72.
Tamin’ny fitondrana Zafy Albert (1993-94) dia voatendry ho isan’ireo mpikambana tao amin’ny “Csc” na Filankevitra ambony momba ny fanaraha-maso (Conseil Superieur de Controle) ny Me Razafinjatovo Willy. Rafitra izay nanara-maso ny seha-pandraharahana ara-toekarena nisian’ny raharaha kimaizimaizina sy nanombohan’ny resaka kolikoly isan-tsokajiny. Ny taona 1995 dia nirotsaka nofidiana ho Ben’ny tanànan’Antananarivo ny Me Ôlala.
Izahay eto amin’ny La Gazette de la Grande Ile dia maneho ny fiaraha-miory sy ny fankaherezana ho an’ny fianakavian’ny Me Razafinjatovo Willy.
Mandria ampiadanaa, Me Ôlala.